ပြည်တွင်းရော ပြည်ပရော ခရီးတွေ မကြာခဏထွက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ?
ကျွန်တော်က ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုက ကြီးပြင်းလာသူမဟုတ်တဲ့အပြင် လုပ်ခဲ့သမျှ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘဝတွေကလည်း ကြိုးစားသလောက် လစာထိုက်ထိုက်တန်တန် မရခဲ့တာ များပါတယ်။ ဘုရားကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့်ပဲ ခုလို ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးတွေ ထွက်ခွင့်ရနေတာပါ။ ကျွန်တော် ခရီးသွား စာတွေ စ ရေးချိန်တုန်းကလည်း ခုလို ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးထွက်ခွင့်တွေ ရနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေး ရလာမယ်လို့ မထင်မိခဲ့ပါဘူး။ ဝါသနာအရ ရေးခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ Facebook ပေါ်မှာ ခရီးသွားစာတွေ စရေးပြီး တစ်နှစ်လောက်အတွင်း သေချာတောင် ပုံမှန် မရေးနိုင်သေးချိန် Emirates လေကြောင်းလိုင်း ရဲ့ ဒူဘိုင်းခရီးစဉ် ဖိတ်ကြားမှုကို စပြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အခကြေးငွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေ စတင် ရရှိလာတော့တာပါပဲ။ ပထမဆုံးဝင်ငွေရခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာကို သေချာမမှတ်ထားမိခဲ့တာတော့ ခုလို ပြန်ပြောပြချိန်မှာ နောင်တ အတော်ရပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရယ်၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ် မြတ်နိုးစေတနာထားမှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးရယ်ကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ငွေကြေးကုန်ကျမှုမရှိဘဲ ထွက်ခွင့် ရခဲ့တာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ခရီးထွက်တဲ့အခါ ဘယ်ပစ္စည်းတွေကို အထောက်အကူအနေနဲ့ ယူသွားတတ်လဲ?
ကျွန်တော့်အတွက် အရေးကြီးတာကတော့ ကင်မရာ ပေါ့။ ကင်မရာကို အကြီးအငယ် မျိုးစုံ သုံးရတယ်။ လက်ရှိတော့ SONY A7M2 ကိုပဲ Lens နှစ်ခုနဲ့ သုံးနေတယ်။ တစ်ခုက 85mm၊ နောက်တစ်ခုက 16-35mm ပါ။ Samsung Galaxy Note 10+ ကင်မရာကလည်း အတော် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မှာ Yi Action Cam လေးတစ်လုံးလည်း ရှိသေးတယ်။ သူ့ကိုတော့ ရေအောက်ရိုက်ဖို့လောက်ပဲ သုံးဖြစ်တာ။ အရင်က DJI Spark Drone လေး ရှိခဲ့သေးတယ်။ အဲ့လိုပဲ ရိုက်ရင်း လေထဲမှာ ပျောက်သွားရှာတာ။ ကျန်တာကတော့ တစ်ကိုယ်ရည်အသုံးအဆောင်တွေပါပဲ။ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းတွေကို ကျွန်တော်က ဖုန်းထဲမှာ မသွားခင်ကတည်းက Notes နဲ့ မှတ်ထားဖြစ်တယ်။ သွားရင်းဖတ်ရင်းမှတ်ရင်း ပေါ့။
Blog ကို လူသိအောင် ဘယ်လိုကြော်ငြာလဲ?
တကယ့် Blog ကတော့ လူဝင်ကြည့်တာ နည်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ရေးတာ မြန်မာလိုများတော့ မြန်မာတွေကလည်း Social Media မှာပဲ ဖတ်ကြတာများတယ်။ ဟို Link ဝင် ဒီ Link ဝင်တွေ သိပ်မကြိုက်ကြဘူး။ နောက်ပြဿနာတစ်ခုက ဇော်ဂျီဖောင့် နဲ့ ယူနီကုတ်ဖောင့် ပြဿနာ။ ကျွန်တော့် Website က ယူနီကုတ် သုံးတာဆိုတော့ ဇော်ဂျီသမားတွေက ဖတ်လို့ မရကြဘူး။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေအတွက်ကျတော့ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်အကြောင်းပဲ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာများတော့ ဒီကို လာလည်ချင်သူတွေပဲ ဖတ်လောက်မှာပေါ့လေ။ အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖတ်တာလည်း နည်းတယ် ပြောရမယ်။ Facebook page ကတော့ လူသိပိုများပါတယ်။ စလုပ်ခါစတုန်းကတော့ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်နဲ့ Boost ရင် Follower တက်တယ်ထင်ပြီး လျှောက်လုပ်ကြည့်ဖူးတယ်။ Boost တဲ့အချိန် တက်တယ်၊ မ Boost တာနဲ့ လုံးဝ ကျသွားတော့တာ။ ပြီးတော့ ဘယ်က လူတွေမှန်းမသိ ရောက်လာတာများတယ်။ ကိုယ့်ကို တကယ်အားပေးသူ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း အဲ့ဒီနည်းကို မကြိုက်တော့ဘူး။ ရှက်လာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကစပြီး လုံးဝ မ Boost ပဲ၊ content ကိုပဲ ကောင်းအောင် ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း Follower တွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်လာနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို တကယ်နှစ်သက်သူတွေပဲ ရောက်လာတော့တယ်။
နေ့စဉ် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားသတင်းထူးများအပါအဝင် ခရီးစဉ်လည်ပတ်စရာများအကြောင်းတွေ နဲ့ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတအစုံအလင် သိရှိနိုင်ဖို့ အပတ်စဉ်သတင်းလွှာ လေးကို ခုပဲ ရယူလိုက်ပါ။ စာရင်းသွင်းသူများအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စာအုပ် "၁၇" ကဗျာနဲ့ဝတ္ထုတိုစာအုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးပို့သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် သတင်းလွှာကနေတဆင့် အခမဲ့ခရီးသွားခြင်းအစီအစဉ်တွေ၊ ခရီးသွားလက်ဆောင်တွေ စတဲ့ ထူးခြားအခွင့်အရေးတွေလည်း သိရှိနိုင်ဦးမှာပါ။